Maxay ka wada hadleen IGAD iyo Jubbaland? | KEYDMEDIA ONLINE
Maxay ka wada hadleen IGAD iyo Jubbaland?
Kulanka ay yeesheen ayay uga arrinsadeen mashruuc seddex geesood ah oo ku aadan maareynta dhulka islamarkaana laga fulin doono maamul goboleedka Jubbaland, Ismaamulka Mandheera iyo Dowlad deegaanka Soomaalida.
KISMAAYO – Somaaliya - Magaalada Kismaayo waxaa manta kulan ku yeeshay wafdi ka socday urur goboleedka IGAD iyo Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland oo ay weheliyaan Wasiirka Gargaarka iyo Maareynta Musiibooyinka iyo Wasiiru Dowlaha Madaxtooyada Jubbaland.
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Dowlad Goboleedka Jubbaland ayaa wafdiga uga mahad celiyay wadashaqyenta ay la leeyihiin Maamulka Jubbaland iyo mashaariicda ay ka fulinayaan degaannada Jubbaland.